काठमाडौं उपत्यकामा ४५ सहित थप २७४ जनामा कोरोना संक्रमण - Jana Prashasan
Monday 21st , September 2020 | सोमवार, अशोज ५, २०७७
काठमाडौं उपत्यकामा ४५ सहित थप २७४ जनामा कोरोना संक्रमण
काडमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २७४ व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयको नियमित कोभिड–१९ प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सो कुराको पुष्टि गरेका छन् । यीसँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको कुल संख्या १९ हजार ५४७ पुगेको हो । सो अवधिमा छ हजार ३०४ वटा नमूनाको परीक्षण भएको उनले जानकारी दिएका थिए ।
प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार आज थपिने नयाँ संक्रमितमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ४५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसअनुसार काठमाडौंमा ४१, ललितपुर र भक्तपुरमा गरी दुई–दुई जना रहेका छन् । यस अनुसार अहिलेसम्म काठमाडौंमा ३९०, ललितपुरमा ९१ र भक्तपुरमा ५३ जना संक्रमित भएका छन् । उपत्यकामा यसअघि मंगलबार ५३ र बुधवार १५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
यसै अवधिमा थप २२७ जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्केको प्रवक्ता गौतमले जानाकारी दिए । यसरी नेपालमा हालसम्म कोरोना जितेर डिस्चार्ज हुनेको संख्या १४ हजार २७८ पुगेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर ५ हजार २ सय २७ सक्रिय संक्रमितको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । यस्तै हालसम्म ३ लाख ६४ हजार ६ सय ४८ जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ । यसैगरी १३ हजार २०१ जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
News Desk0response बिहिबार, साउन १५, २०७७
भारतमा एकैदिनमा ९२ हजार ६०५ सङ्क्रमित
‘कोभिड १९’ बाट विश्वमा सङ्क्रमितको संख्या तीन..
भियतनाममा शक्तिशाली आँधी, तीनको मृत्यु, एक सयभन्दा..
२४ घण्टामा थपिए १२०४ जना कोरोना संक्रमित,..
प्रेम राईलाई चोख्याउन करोडौको मुद्धा अख्तियारमा तामेली
सिन्धुपाल्चोकको पहिरोमा २८ बेपत्ता अनुमान तीनको शव..
नैतिकतामा खोट लगाएरै अख्तियारका प्रमुख बिदा
यही अवस्थामा आधिकारीक ट्रेड युनियनको चुनाव भए..
घुम्थाङ पहिरोमा २० अझै बेपत्ता (नामावलीसहित..